အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ သီအိုရီ (စီးပွားရေးကိစ္စ) တွင် ပုံစံဖြည့်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ သီအိုရီ (စီးပွားရေးကိစ္စ) တွင် ပုံစံဖြည့်ခြင်း
အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ သီအိုရီ (စီးပွားရေးကိစ္စ) တွင် ပုံစံဖြည့်ခြင်း
Posted by ကုိၿငိမ္းေအး on Jun 14, 2012 in Copy/Paste | Comments Off on အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ သီအိုရီ (စီးပွားရေးကိစ္စ) တွင် ပုံစံဖြည့်ခြင်း
မသိမှု ဖြစ်စဉ် သီအိုရီ (အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ)ကို ပုံစံဖြည့်ခြင်း နှင့်
အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ သီအိုရီ (လူမှုရေးကိစ္စ) တွင် ပုံစံဖြည့်ခြင်း အဆက်ဖြစ်ပါသည်။
စားဝတ်နေရေးအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြတဲ့အခါမှာ မိမိလုပ်ငန်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး (အဝိဇ္ဇာ) သိသင့်သိထိုက်တာများကို သေသေချာချာ ဂဃနဏ မသိပါက (သင်္ခါရ) မှားယွင်း၊ လွန်ကဲစွာ ပြုမူလုပ်ဆောင်မိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ မှားယွင်း၊ လွန်ကဲစွာ လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်ပဲ ပြုမူလုပ်ဆောင်မိပါက နောက်ဆုံးမှာ
“ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ဟောတိ“ဆိုသည့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေပဲ ရရမှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာ (ဝိဇ္ဇာ) သိသင့်သိထိုက်တာ တွေကို သေသေချာချာ ဂဃနဏ သိအောင်လုပ်မိဖို့လိုပါတယ်။
“ကံ၊ ဉာဏ်၊ ဝိရီယ”
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တစ်ပါးသူက လုပ်ကိုင်လို့ စီးပွားဖြစ်တိုင်း မိမိကလိုက်၍ လုပ်ကိုင်ပါက စီပွားဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုရသော် ထိုလုပ်ငန်းအမူကိစ္စ (ကံ) အပေါ်တွင် (ဉာဏ်) လုပ်ငန်းနားလည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် (ဝိရီယ) လုပ်ငန်းကြိုးစားမှုကွာခြားခြင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိပြုလုပ်မည့် လုပ်ငန်းကိစ္စများကို နားလည်ကျွမ်းကျင်ဖို့သည်အရေးကြီးပေသည်။
တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုံလောက်သော အရင်းအနှီးရှိသော်လည်း
လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်မှုတို့ကြောင့် အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာဆိုသည့်အတိုင်း မသိမှုတွေနှင့် မတော်တာတွေလုပ်မိပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ “ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ဟောတိ“ဆိုသည့် စီးပွားရေးဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တတ်ယောင်ကားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်နေသူများ သတိထားသင့်ပါသည်။
“ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ နိရောဓော ဟောတိ”
မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်တွင် (ဝိဇ္ဇာ) သေသေချာချာ ဂဃနဏ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များကိုတော့
ငွေအရင်းအနှီးရှိသူများက ရင်းနှီးထုတ်ပေးလိုကြခြင်းကြောင့် ထိုသူတို့သည့် လုပ်ငန်းကိစ္စများကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ကြိုးစားပြီး အကောင်းအထည်ဖော်ဆောင်ပါက အောင်မြင်ကြီးပွားသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ နိရောဓော ဟောတိ” ဆိုသည့် ဆုံးရှုံးမှုတွေကို လွန်မြောက်ပြီး အောင်မြင်ပေါက်မြောက်သော အဖြစ်သို့ရောက်ရခြင်းသည် မိမိလုပ်ငန်းကို သေသေချာချာ ဂဃနဏ နားလည်ကျွမ်းကျင်သော ဝိဇ္ဇာ ဆိုသည့် အသိဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာ့ချမ်းသာကြွယ်ဝကြသူများတွင် နည်းပညာဖြင့်စီးပွားရှာကြသူများက ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်နေကြခြင်းမှာ (ဝိဇ္ဇာ) လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်နားလည်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုများကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ စီးပွားရှာအလုပ်များသွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြသောအခါများတွင် . . .
ကိုယ်သွားရောက်မည့် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ၊ လူနေမှုသဘာဝ၊ လုပ်ရမည့် အလုပ်အကိုင်တို့၏ သဘောသဘာဝတို့ကို (အဝိဇ္ဇာ) သေသေချာချာသိရှိချင်းမရှိပဲ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ ငွေရရင်ပြီးရောဆိုကာ (သင်္ခါရ = အဘိသင်္ခါရ – လွန်ကဲသောအမှု) အိမ်ပေါင်၊ ယာပေါင်၊ ငွေတိုးများယူကာ မနိုင်မနင်းဖြင့် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ မသေမချာဖြင့် အိမ်ယာပေါင်၊ ငွေတိုးများယူကာ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြခြင်း များကြောင့် လုပ်ငန်းများအဆင်မပြေဖြစ်ကာ ပေါင်နှံထားသည့် အိမ်ယာများ ပြန်မရွေးနိုင်လို့ “ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ဟောတိ“ဆိုသည့် စီးပွားပျက် ဆုံးရှုံးရခြင်းများမှာလည်း “အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ” ဆိုသော မသိမှုတွေကြောင့် မတော်တာတွေလုပ်မိခဲ့ခြင်း၏ အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေသည်။
“မကျွမ်းကျင်သူများ လက်အောက် လုပ်ကိုင်နေရခြင်း”
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ ကုမ္ပဏီများတွင်လည်း ဝန်ထမ်းလုပ်သားများစီမံအုပ်ချုပ်သည့်အခါများတွင်လည်း လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု ရှိ၊ မရှိထက်၊ နီးစပ်ရာလူများအားဖြည့်သွင်းအစားထိုးကာ နေရာပေးမှုတို့ကြောင့်
အဆိုပါလုပ်ငန်းတို့ ကျဆုံးလာရခြင်းမှာလည်း “အဝိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သင်္ခါရာ” သဘောတရားကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပေသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုရသော် အထက်ရာထူးနေရာမှ စီမံခန့်ခွဲရမည့်သူသည် မိမိလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများလောက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သိမြင်မှု မရှိခြင်း (အဝိဇ္ဇာ) ကြောင့် (အဘိသင်္ခါရ) ဝန်ထမ်းများအပေါ် မသင့်တော်မလျော်ကန်သည့် အလုပ်များစေခိုင်မိကာ လုပ်ငန်းများ မအောင်မြင်ရမှု (ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ဟောတိ) တို့ဖြစ်ရခြင်းသည် လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်သူက အထက်က စီမံခန့်ခွဲနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း . . ယနေ့ခေတ်လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် ခေတ်ပေါ် ဓါတ်မြေဩဇာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများကို မဖြစ်မနေသုံးနေကြရပါတယ်။ တောင်သူဦးကြီးများအနေနှင့် မိမိတို့ သုံးစွဲနေရသော ဓါတ်မြေဩဇာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၏ အကြောင်းအချက်အလက်များကို သေသေချာချာ သိရှိထားမှုမရှိပဲ အပေါ်ယံ သူများပြောသံကြားလောက်အသိ (အဝိဇ္ဇာ)တို့ကြောင့် လိုအပ်သည့် ပမာဏထက် လျော့အသုံးပြုမိခြင်း၊ ပိုမိုအသုံးပြုမိခြင်း (အဘိသင်္ခါရ)တို့ဖြစ်ကာ (ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ဟောတိ) သီးနှံအထွက်နှုံးများကျဆင်းပြီး ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်နေကြရပါတယ်။
ထို့ကြောင့် တောင်သူဦးကြီးများသည် မိမိတို့ သုံးစွဲနေရသော ဓါတ်မြေဩဇာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ပတ်သက်၍ (ဝိဇ္ဇာ) သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တို့ထံတွင် သေသေချာချာနားလည်အောင် လေ့လာမှသာလျှင် (ဝိသင်္ခါရ=လွန်ကဲစွာ မပြုခြင်း) ပမာဏမှန်သုံးစွဲနိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီး “ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ နိရောဓော ဟောတိ” ဆိုသည့် ဆုံးရှုံးမှုများလျော့နည်းကာ သီးနှံးအထွက်နှုံးများကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထွက်ကုန်သီးနှံတို့ကို ခေတ်ပေါ်စားသောက်ကုန် ကုန်ချောများဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည့် နည်းပညာတို့ကို မသိခြင်း၊ မတတ်ကျွမ်းခြင်းစသည်(အဝိဇ္ဇာ)တို့ကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ (အဘိသင်္ခါရ) ဈေးအနှိမ်ခံရောင်းချရခြင်းများဖြစ်ကာ ရသင့်သလောက်အကျိုးခံစားခွင့်များ မရခြင်းဆိုသည့် “ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ သမုဒယော ဟောတိ“ ဖြစ်ရခြင်းသည် နည်းပညာမကျွမ်းကျင်မှု ” အဝိဇ္ဇာ” ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သော ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ပြုလုပ်ထားသော စားသောက်ကုန် ကုန်ချောများကို ဈေးကြီးပေးကာ ဝယ်ယူ စားသောက်နေရလို့ “မိအေး နှစ်ခါနာ”မျိုးဖြစ်ကာ နစ်နာရခြင်းများ၏ အဓိက လက်သည်မှာလည်း မိမိတို့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်လို့ သိသင့်သိထိုက်တာများကို မသိမှု “အဝိဇ္ဇာ”ဆိုသည့် တရားသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် တောင်သူဦးကြီးများးအနေနှင့် . . .
မိမိတို့ သုံးစွဲနေရသော ဓါတ်မြေဩဇာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ပတ်သက်၍ သေသေချာချာ ဂဃနဏ သိရှိခြင်း၊
လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည့် နည်းပညာများကို တတ်ကျွမ်းနားလည်းခြင်း စတဲ့ “ဝိဇ္ဇာ”ဆိုသည့် အသိတရားများဖြင့် မိမိတို့လုပ်ငန်းများတွင် “ဝိသင်္ခါရ” ဆိုသည့် ပမာဏမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမည်ဆိုပါက
“ဒုက္ခက္ခန္ဓဿ နိရောဓော ဟောတိ” ဆိုသည့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ ပပျောက်ကာ အကျိုးခံစားခွင့်တို့ကို ထိုက်တန်စွာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် မိမိတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်မှာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ (မောဟ)ဖြင့် ပြုလုပ်ကြခြင်းမဟုတ်ပဲ သိသင့်သိထိုက်တာ မှန်သမျှကို သိသူ (ဝိဇ္ဇာ) ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်မှသာလျှင် မှားယွင်း၊ လွန်ကဲသည့် အလုပ် (သင်္ခါရ)များ မပြုမိပဲ အောင်မြင်သော၊ ငြိမ်းချမ်းသော၊ (ဒုက္ခနိရောဓ) အကျိုးခံစားခွင့်အပြည့်အဝဖြင့် ရရှိနေထိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါသည်။
(ဆက်လက်၍ ပညာရေးကိစ္စများတွင် ပုံစံဖြည့်တင်ပြပါဦးမည်။)